Ny fiainana manokana sy ny fepetra - WoopShop ®
Tongasoa eto WoopShop.com. Raha mijery na mividy avy amin'ny WoopShop.com, ny fiarovana anao sy ny mombamomba anao manokana dia arovana sy hajaina. WoopShop.com dia manolotra serivisy tsara indrindra ho anao raha tsy amin'ny fanamarihana, fehezan-teny ary fepetra apetraka eto amin'ity pejy ity.
1. politika fiarovana fiainan'olona
• Manaja ny fiainana manokana amin'ny mpitsidika sy ny mpanjifa rehetra ny WoopShop.com ary raiso mafy ny fiarovana an-tserasera.
• WoopShop.com manangona ny fampahalalana dia misy ny mailaka, ny anarany, ny anaran'ny orinasa, ny adiresy arak'asa, ny kaonty paositra, ny tanàna, ny firenena, ny laharana an-tariby, ny tenimiafina sy ny sisa, mba hanombohana, dia mampiasa cookies izay ilaina hanangona sy hanangona ny tsy misy fampahalalana manokana azo jerena momba ny mpitsidika ny tranokalantsika. Ny fampahalalana anao dia tokana ho anao. Ny mpampiasa anefa dia mety hamangy tsy misy anarana ny tranokalanay. Ny fampahalalana momba ny mombamomba ny tena manokana no ataonay avy amin'ireo mpampiasa raha toa ka an-tsitrapo an-tsitrapo izany. Ny mpampiasa dia afaka mandà foana ny hanome fampahalalana momba ny mombamomba ny tena manokana, afa-tsy ny hanakana azy ireo tsy handray anjara amin'ny hetsika manokana mifandraika amin'ny Site.
• Azontsika atao ny manangona fampahafantarana manokana avy amin'ireo mpampiasa amin'ny fomba maro isan-karazany, ao anatin'izany, saingy tsy voafetra ihany, rehefa mitsidika ny tranokalanay ny mpampiasa, misoratra anarana amin'ny tranokala, mametraka lamina, mamaly amin'ny fanadihadiana, mameno endrika ary mifandraika. miaraka amina hetsika, serivisy, endri-javatra na fitaovana hafa ataontsika ao amin'ny tranokalanay. Ireo mpampiasa dia mety angatahina, raha mety, anarana, adiresy mailaka, adiresy mailaka.
• Mampiasa ny fampahalalana izahay mba hanamora kokoa ny hampiasaanao, hamaliana ny fangatahana na fitarainana, mba hanampiana anay hampiseho ny tena mifandraika aminao ary hampahatsiahy anao ny vaovao vaovao, ny vokatra amidy, ny tapakila, ny fampiroboroboana manokana ary ny sisa on.
• Mandritra ny fisoratanao dia hoentina ianao hanome anay ny anaranao, ny adiresy fandefasana ary ny fandoavam-bola, ny laharana an-tariby ary ny adiresy mailaka. Ireo karazana fampahalalana manokana ireo dia ampiasaina ho an'ny tanjon'ny volavolan-dalàna, hanatanterahana ny baikonao. Raha manana olana isika rehefa manamboatra ny baikonao, dia mety hampiasa ny mombamomba anao manokana anao izahay mba hifandraisana aminao.
• Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny alàlan'ny rohy mailaka na ny fandefasanao famandrihana manokana aorian'ny fidirana.
• Azontsika atao ny manangona fampahalalana tsy mombamomba manokana momba ireo mpampiasa raha sendra mifanerasera amin'ny tranokalanay izahay. Ny fampahalalana tsy momba ny tena manokana dia mety ahitana ny anaran'ny navigateur, ny karazana informatika sy teknika momba ny fampifandraisan'ny mpampiasa amin'ny tranokalanay, toy ny rafitra sy ny serivisy mpampiantrano Internet ampiasaina ary ny fampahalalana hafa mitovy.
• Ny tranokalanay dia mety hampiasa "cookies" hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Mahazo mofomamy amin'ny zotram-pilany amin'ny alàlan'ny fikarakarana firaketana an-tsoratra ny zotram-pifandraisan'ny mpampiasa azy ary indraindray mba hahitana vaovao momba azy ireo. Ireo mpampiasa dia mety hisafidy ny hametraka ny Internet web mba handà ny mofomamy na hanaitra anao raha alefa ny mofomamy. Raha manao izany izy ireo dia mariho fa ny ampahany sasany amin'ny tranokala dia mety tsy mandeha tsara.
• WoopShop manangona sy mampiasa ny mombamomba ny mpampiasa manokana ho an'ireo tanjona manaraka ireto:
(1) Mampiavaka ny traikefan'ny mpampiasa
Mety hampiasa ny vaovao ao amin'ny aggregate mba hahatakatra ny fomba ny mpampiasa amin'ny fitambarany mampiasa ny asa sy ny loharanon-karena nanome antsika Site.
(2) Manatsara ny tranokalanay
Miezaka foana izahay hanatsara ny fahafahan'ireo tranonkala mifototra amin'ny vaovao sy ny valin-kevitra azonay avy aminareo.
(3) Manatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Ny fampahalalana omenao dia manampy antsika hamaly tsara kokoa ny fangatahanao amin'ny serivisy sy ny zavatra ilaina.
4) Hanatanteraka fifanakalozana
Mety hampiasa ny vaovao momba ny tenany ireo mpampiasa manome rehefa mametraka baiko fotsiny mba hanomezana asa fanompoana izany mba. Isika tsy mitovy amin'ny any ivelany ity antoko vaovao afa-tsy ny araka ilaina ny manome ny asa fanompoana.
(5) Mitantana votoaty, fampiroboroboana, fanadihadiana na endri-javatra hafa amin'ny site
Handefa Users vaovao izy ireo nanaiky handray momba ny lohahevitra mieritreritra isika dia ho mahaliana azy ireo.
(6) handefa mailaka maharitra
Ny adiresy mailaka Miantso ny fanodinana ny ordinatera ny mpampiasa, dia ampiasaina fotsiny ny mandefa azy ireo vaovao sy ny fanavaozana mifandraika amin'ny baiko. Mety ampiasaina ihany koa izy hamaly ny fanontaniany, ary / na fangatahana hafa na fanontaniana. Raha manapa-kevitra ny handefa mailaka amin'ny lisitry ny mailaka mailo ny mpampiasa, dia hahazo mailaka izy ireo izay mety ahitana fampitam-baovao, famandrihana, vokatra azo ampiasaina na serivisy fampahafantarana, sns. Raha toa ka te hiala amin'ny fandraisana an-tsoratra mailaka ny mpampiasa, amin'ny antsipiriany Ny toromarika tsy hanoratra ao amin'ny faran'ny mailaka tsirairay na ny mpampiasa dia afaka mifandray aminay amin'ny tranokalanay.
• Manararaotra ny angon-drakitra, fitahirizana ary fanodinana mety ary fepetra fiarovana hiarovana amin'ny fahazoana alalana, fanovana, fanambaràna na fanimbana ny mombamomba anao manokana, anarambola, tenimiafina, fampahalalana momba ny fifanakalozana ary tahiry voatahiry ao amin'ny tranokalanay.
Ny fifanakalozam-peo mafonja sy tsy miankina eo anelanelan'ny Site sy ny mpampiasa azy dia mitranga amin'ny serasera SSL azo antoka ary voahidy sy miaro amin'ny sonia dizitaly.
• Tsy mivarotra na manao varotra, na manofa ny mombamomba ny fampahafantarana manokana an'ny mpampiasa izahay amin'ny hafa. Azontsika atao ny mizara fampahalalana demografika goavambe tsy mifamatotra amin'ny fampahafantarana mombamomba manokana momba ny mpitsidika sy ny mpampiasa amin'ny mpiara-miasa aminay, mpiara-miombon'antoka azo atokisana ary mpanao doka ho an'ny tanjona voasoritra etsy ambony. Azontsika atao ny mampiasa ny mpamatsy serivisy fahatelo mba hanampiana anay hampiasa ny orinasanay sy ny tranokala na hitantana hetsika ho anay, toy ny fandefasana gazety na fanadihadiana. Azontsika atao ny mizara ny fampahalalana anao amin'ireto antoko fahatelo ireto noho ireo antony voafetra nomenao ny fahazoan-dàlana anao.
• Ireo mpampiasa dia mety hahita dokambarotra na votoaty hafa ao amin'ny tranokalanay izay mampitohy ireo tranonkala sy serivisy ho an'ny mpiara-miombon'antoka, mpamatsy, dokambarotra, mpanohana, mpahazo lalana ary misy fety fahatelo. Tsy fehezinay ny votoatiny na rohy hita ao amin'ireny tranokala ireny ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fanao ampiasain'ny tranokala mifamatotra na avy amin'ny tranokalanay. Ankoatr'izay, ireo tranonkala na serivisy ireo, ao anatin'izany ny atiny sy ny rohy, dia mety miova tsy miova. Ireo tranonkala sy serivisy ireo dia mety manana ny politikany manokana sy ny politikan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny alàlan'ny alàlan'ny tranokala sy fifaneraserana amin'ny tranokala hafa, ao anatin'izany ny tranonkala izay misy rohy mankany amin'ny tranokalanay dia miankina amin'ny fepetra sy ny politikany manokana.
• Ity andalan-dàlana Politika momba ny tsiambaratelo ity dia manazava ny fampiasana ny angon-drakitra manokana amin'ny serivisy fandoavam-bola (Apple pay). Ankoatr'izay, tokony hamaky ireo fepetra sy fepetra an'ny Apple Pay ianao. Ny asanao amin'ny alàlan'ny WoopShop dia tsy misy ifandraisany amin'ny Apple Inc.
Rehefa mampiasa fandoavan-bola ny Apple Pay ianao dia mety mangataka fanazavana momba ny banky, mandoa vola sy adiresy mailaka, saingy i WoopShop dia tsy hanangona sy hitahiry ny fampahalalana avy amin'ny endrikao, ary tsy hizara ny mombamomba anao manokana amin'ny dokambarotra na andrim-panjakana miasa hafa. amin'ny endriny rehetra.
• Ny WoopShop dia manana ny fahazoan-dàlana hanavao izany politikam-piainany amin'ny fotoana rehetra. Amporisihinay ny mpampiasa azy hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana ilaina hampahalalana momba ny fanampiana ny fiarovana ny fampahalalana manokana angoninay. Ekenao ary ekenao fa anjaranao ny mandinika tsindraindray ity politikanao momba ny fiainana manokana ity ka ho tonga saina amin'ny fanovana.
• Amin'ny fampiasana ity tranonkala ity dia manondro ny fanekenao an'io politika io ianao. Raha tsy ekenao amin'ity politika ity ianao, azafady fa aza mampiasa ny tranokalanay. Ny fampiasana ny tranokala aorian'ny fanoratana ny fanovana amin'ity politika ity dia ho raisin'ireo fiovana ireo.
• Raha manana fanontaniana momba ity Politika momba ny fiainana manokana ity ianao, ny fanaon'ity tranokala ity, na ny fifandraisanao amin'ity tranokala ity, azafady mba hifandraisa aminay [mailaka voaaro] or [mailaka voaaro]
• Misolo tena sy manome toky ianao fa 18 taona eo ho eo ianao na mitsidika ilay tranokala eo ambany fanaraha-mason'ny ray aman-dreninao na mpiambina anao. Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fidirana rehetra sy ny fampiasana an'ity tranokala ity na iza na iza mampiasa ny tenimiafina sy fampahafantarana anao tany am-boalohany, na ianao na tsia ny fidirana sy ny fampiasana an'ity tranokala ity dia naorin'ny anao tokoa na tsia.
• Afaka mandefa avy amin'ny trano fivarotana samihafa ny WoopShop.com. Ho an'ny baiko manana zavatra mihoatra ny iray, azontsika atao ny manasaraka ny filahanao ao anaty fonosana maromaro arakaraka ny haavon'ny tahiry araka ny fanjifantsika manokana. Misaotra anao noho ny fahatakaranao.
• Raha tsy omena amin'ny toerana hafa eto amin'ity pejy ity na amin'ny tranokala izany, ny zavatra atolotrao na halefanao amin'ny WoopShop.com, ka tsy misy fetrany, hevitra, fahalalana, teknika, fanontaniana, famerenana, hevitra, ary soso-kevitra miaraka, dia hoentina ny fangatahana. satria tsy tsiambaratelo sy tsy vola, ary amin'ny alàlan'ny fandefasana na ny fandefasana ny fanekena, manaiky ny fahazoan-dàlana tsy ara-dalàna ny fidirana ianao ary ny zon'ny IP rehetra momba azy, anisany ny zo ara-moraly toy ny zon'ny mpamorona an'i WoopShop.com tsy misy fiampangana ary ny WoopShop dia tsy hanana fanjakana.
• Tsy mampiasa adiresy mailaka sandoka ianao, mody ho olon-kafa noho ny tenanao, na handiso lalana ny WoopShop.com na antoko-telo momba ny niandohan'ny fandefasana na ny atiny. Ny WoopSHop.com dia mety, saingy tsy voatery voatery hanaisotra na hanova izay hevitra rehetra ao anatin'izany ny fanehoan-kevitra na ny hevitra momba ny antony.
• Ny lahatsoratra rehetra, sary, sary na sary hafa, kisary bokotra, sary audio, logos, slogan, anarana momba ny varotra na rindrambaiko sy teny hafa ao amin'ny tranokalan'ny WoopShop.com, ny votoatiny dia miankina amin'ny WoopShop.com na ny atiny mety aminy. mpamatsy. Ny zo rehetra izay tsy omena mazava dia natolotry ny WoopShop.com. Ireo mpandika lalàna dia ho henjehinny lalàna feno.
• Azafady azafady fa misy ny baiko sasany izay tsy azontsika ekena ary tsy maintsy manafoana. Samy nifanaraka ny roa tonta fa, taorian'ny fanonganana ny baiko, ny fitaterana no andraikitry ny orinasam-pifandraisana fahatelo. Mandritra ity dingana ity, ny fananana feno ny vokatra (s) dia an'ny mpividy; ny andraikitra rehetra sy ny loza ateraky ny fitaterana dia tsy maintsy alain'ny mpividy.
• Ny WoopShop.com dia mety misy rohy mankany amin'ireo tranokala hafa amin'ny Internet izay fananana sy ampandehon'ireo antoko fahatelo. Ekenao fa ny WoopShop.com dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana na ny votoatiny misy na amin'ny alàlan'ny tranokala toy izany.
• ZoopShop.com dia manana zo hanova ireo teny sy fepetra ireo amin'ny ho avy nefa tsy fampandrenesana.